आगामी दशैंभित्र रेल चढ्ने नेपाली सपना पूरा - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०१:३३ |
काठमाडौं । नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको आठ वर्ष भइसकेको छ। आव २०६६–६७ बाटै सुरु भएको योजनालाई छुट्टै निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभागको स्थापना गरेको थियो। विभाग गठन भएको साढे पाँच वर्ष भइसकेको छ। यस बीचमा रेलका आधा दर्जनभन्दा बढी योजना आगाडि बढेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै परेको ९४५ किमिको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको खण्डगत रूपका काम भइरहेको छ।
पछिल्लो समय यसको चर्चा बढेको छ भने नेपालीको रेल सपना कहिले पूरा हुने भनि व्यग्र पर्खाइमा छन् नेपालीहरू। रेलमार्ग निर्माण गर्दा बढीमा तीन प्रतिशतभन्दा उकालो नचढ्ने गरी बनाउने गरिन्छ। रेलमार्ग बनाउँदा एक सय मिटरसम्ममा बढीमा तीन मिटरको मात्रै उचाइ हुने र सोभन्दा बढी भए रेल जान नसक्ने प्राविधिकको सुझाव छ। तीन प्रतिशतभन्दा कम उकालोरओरालो हुने गरी बनाउनुपर्ने भएकाले पुल, सुरुङ र घुम्ती धेरै हुन्छ। यी चुनौतीका कारण नेपालमा रेलमार्ग निर्माण लागत धेरै पर्ने, दक्ष जनशक्ति अभाव र योजना कार्यान्वयन नहुने समस्याले नेपालीका लागि रेल योजनामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ।
सबैभन्दा पहिले जनकपुर–जयनगर खण्डमा नेपालीले रेल चढ्न पाउनेछन्। यस खण्डमा रेलमार्ग निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले आगामी असोजभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।
Previousतेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार,को को भए मन्त्री ?
Nextघोडेजात्रा पर्व आज : टुँडिखेलमा किन दौडाइन्छ घोडा ?
हेर्दाहेर्दै बगे १५ घर
२६ श्रावण २०७४, बिहीबार ०१:१८